Serivisy sy mpamatsy sary tsara indrindra | Hongyu
Tamin'ny 2013, ny US Sano Show dia nanolotra ny Laser, laser faharoa picoSure 755nm hive miaraka amin'ny halavan'ny 755nm.
Tamin'ny 2015 dia voamarina ho NMPA any Sina izy. Ny halavan'ny 755nm dia manana fiasan-tsitrapo mifantina tsara ho an'ny melanin, ary ny vokatry ny fanesorana ireo sombin'ny vatana dia tena tsara.
Tamin'ny volana desambra 2017, NMPA any China dia nankatoavina amin'ny fitsaboana ny lesoka pigment epidermal, ary tamin'ny volana septambra 2020 tany China, NMPA dia nanaiky ny fitsaboana ny dermal pigment lesion.
Lens Diffraction Focus Unique tsy manam-paharoa, ny angovo laser dia azo atao mifantoka be, tsy manimba ny sela ara-dalàna ivelan'ny loko, ny famokarana ny vokan'ny LIOB, mandrisika ny fahaterahana indray collagen, tena tsy mahatratra fotoana fohy.
PicoSure Hive laser faharoa dia singa roa FDA-NMPA voamarina fa manala ny laser segondra hoditra misy tombokavatsa sy chromatosis tsara. Amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny fitrohana hafanana voafantina, ny teknolojia bobongolo fanidiana faharoa tsy manam-paharoa dia ampiasaina hamokarana vokatra photomekanika amin'ny fototry ny lokon'ny lokon'ny hoditra amin'ny alàlan'ny halavan'ny 755nm miavaka sy ny faharetan'ny pulsa fohy, mba hanaparitahana ireo sombintsombin'ny pigment .
Ny sandan'ny savaivo melanin 755nm dia avo lenta vokarin'ny tsora-kazo emeraoda mahavariana dia avo, ary rehefa mihetsika amin'ny sombintsombin'ny pigmenta dia kendrena bebe kokoa izy io, noho izany dia azo ampiasaina hanasitranana pigmentation superficial sy pigmentation dermal, izay mila lava-lava iray monja mba hifanaraka amin'ny karazany ny lesoka pigmenta mahazatra. Mandritra izany fotoana izany, satria ny fandraisana ny melanin dia matanjaka kokoa, dia tsy hanimba ny sela ara-dalàna hafa, ka ny fitsaboana ny fanaintainana ambany, ny valin'ny postoperative maivana.
Tena sakan'ny pulsa fohy: ny sakany PicoSure dia 550-750ps, ny iray picosecond dia iray lavitrisa segondra, 10 minus 3 segondra toradroa, ny fikarohana dia mampiseho fa raha ampitahaina amin'ny laser nanosecond, 755nm ny fitsaboana laser picosecond dia fohy, vitsy kokoa ny fitsaboana ary manana fahafaham-po ny marary avo kokoa .
Halavan'ny halavany: Amin'ny fampiasana laser pissar halavan'ny 755nm, ny halavan'ny halavany dia mitroka intelo ny halavan'ny 1064nm ny halavan'ny melanin, ka ny fihetsika aorian'ny fandidiana dia malefaka izaitsizy ary ny vokatra dia tsara ho an'ny traikefa amin'ny marary.
Ny sakany amin'ny pulse dia ampifandraisina amin'ny tombony amin'ny halavan'ny halava: Noho ny sandan'ny 755nm melaninina avo lenta, ny hakitroky ny angovo faran'izay ambany sy ny sakan'ny pulse an'ny faharoa no azo ampiasaina hitsaboana ny pigmentation hatramin'ny mazava ka hatramin'ny maizina.
Smart Pigment Zoom Hand: Ny fitsaboana dia mila mitandrina ny valin'ny teboka farany, fa tsy miantehitra amin'ny fitsipi-dalao fotsiny, ny fitsaboana marina.
Fantsom-piompiana misy patanty: masom-pihavanana mifantoha, atambatra amin'ny halavan'ny halavany 755nm, dia mamokatra LIOB eo anelanelan'ny tena epidermis, manentana ny famokarana collagen ary ny fahatanoran'ny tarehy, teknolojia amin'ny hoditra izay manana trauma kely tokoa amin'ny tena hevitry ny teny ary tsy mila izany. fotoana fohy
Mode BOOST: Amin'ny maody BOOST, ny sakany amin'ny pulso PicoSure dia azo zahana hatramin'ny 750ps ka hatramin'ny 550ps, hampitombo ny tsindry fanapoahana hatramin'ny 70% ary hanaparitaka tatoazy maditra izay sarotra esorina.
Teo aloha: PicoWay